MoeMaKa Burmese News & Media | USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။ ရန်ကုန် ဆက်သွယ်ရေး – အမှတ် ၂၅၄၊ ပထပ်၊ လမ်း ၄၀၊ ကျောက်တံတား၊ ရန်ကုန်။ (ဖုံး – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈) ဖြန့်ချိရေး – ဆိပ်ကမ်းသာစာပေ – အမှတ် ၁၃ / ၃၈ လမ်း။ ပလာဇာဈေးသစ် ။ ၀၉ ၇၈၆၈၃၇ ၃၀၅ / ၀၉ ၉၆၃၆၉၉၈၃၄ | Page 896
>Former Political Prisoners donate food to Mental Hospital Patients
> ကော်ဖီ အောင်ဒင် နိုဝင်ဘာ ၁၊ ၂၀၀၈ ချစ်သူရေ မင်းကိုငါ နံမည်တခုပေးမယ် …. ကော်ဖီ မင်းကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ မင်းသိသည်ဖြစ်စေ၊ မသိသည်ဖြစ်စေ မင်းရဲ့နာမည်အသစ်ဟာ …. ကော်ဖီ။ မင်းကိုသတိရလိုက်ရုံနဲ့...
> ရန်ကုန် တပ်မတော်ခမ်းမတွင် အိုင်စီတီ ပြပွဲ စည်ကား မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃၊ ဓာတ်ပုံသတင်း နိုဝင်ဘာ ၁၊ ၂၀၀၈ ယခု ရက်သတ္တပတ်က စပြီး ၁၀နှစ်မြောက် အိုင်စီတီပြပွဲကို ရန်ကုန်၊...
> ပဉ္စမမြန်မာနိုင်ငံတော် တည်ထောင်ခန်း(၁၄) အောင်ဝေး နိုဝင်ဘာ ၁၊ ၂၀၀၈ ဘယ်ခေတ်မှာမဆို မဆလ ခေတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နဝတ ခေတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အခုလက်ရှိ နအဖ ခေတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်ခေတ်ဖြစ်ပစေ၊ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်တိုင်းဟာ သမိုင်းအရ အမြဲအရေးပါတယ်။...
> Cartoon Aw Pi Kye – Saving our Earth and Environment – Cartoon Series 15 No tags for this...
> ပြည်တွင်းက ဖတ်မိသမျှ ဂျာနယ် အပိုင်းအစ ဂျာနယ်ဂြိုလ် သာဂိ အောက်တိုဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၈ စမ်းချောင်း ၃ ထပ်တိုက် တခြမ်း ပြိုကျ၊ ရန်ကုန် အဲဝေး သံတွဲခရီးစဉ် နားမည်၊...
Page 896 of 948«1...894895896897898...948»